Archive du 20181116
Rajoelina sy ny MAPAR Fa mitady inona marina ?
Nametraka taratasy teny amin’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) omaly hariva ny Kandida Andry Rajoelina. Mangataka ny fampiatoana ny fikirakirana ny fifidianana ataon’ny CENI sy ny tsy hamoahana aloha ny valim-pifidianana izy ireo.
Tokony hifantoka tanteraka amin’ny fampandrosoana ny firenena amin’izay ny Malagasy ary vonona i Korea Atsimo hanohana, indrindra ny amin’ny lafiny toekarena.
Asehoy ny porofo
Alefaso amin'izay ary ny fampitahana Hita eo hoe ny an'iza no hanampiana iza no hanalana ? Aleo hitsikafona tokoa ny tena marina Dia ho fantatra hoe ny an'iza no nangalarina !
Marc Tatandraza Voasambotra tany Mahajanga
Ela ny ela fa voasambotra ihany i Marc Tatandraza rehefa reraka niafina sy nanao sary maty ary niseho tamin’ny tambajotra facebook naneho fa manohana an’i Andry Rajoelina.